Fanovana toe-tsaina hoe ? | NewsMada
Nahazo lesona tamin’ny filoham-pirenena ny mpanao gazety, ny faran’ny herinandro lasa teo, ny amin’izay voalaza momba ireo raharaha nafampana teto amin’ny firenena, tato ho ato. Anisan’izany, sady nitana ny sain’ny maro, ny « Raharahan’Anjozorobe ». Fa teo koa anefa ny momba ny fampiharana ilay hetra Advance Cargo Declaration (ACD), izay nampifanolana ny mpandraharaha vaventy tamin’ny fitondrana. Ny fotoana nandraisany ireo ben’ny Tanàna voafidy tany Vakinankaratra no nohararaotiny, namborahana ny alahelony, indrindra tamin’ny raharaha nahavoatonontonona ny fianakaviany.
Nangataka ny hilazana ny marina, momba ny « Raharahan’Anjozorobe », ny filoham-pirenena. Fa inona tokoa moa no tena marina mikasika iny raharaha iny ? Iza no tena mpandainga, mpanao fikitra mampiady angely ? Maro ny fanontaniana nipetraka sy mbola apetraky ny maro, ary niandrasam-baliny, avy tamin’ny fitondrana, ny ampitson’ny nitrangan’ireny toe-javatra ireny. Tsy nisy anefa izany, ka vao mainka nihamaro ny baraingo nipetraka.
Iza no omen-tsiny amin’izany ? Ny valala, asa, na tena nisy tokoa na tsia, ka nohararaotin’ny mpilaza izay tena nahay tokoa izany. Tsy voatery ho ny mpanao gazety izany. He ireo mpanao politika,… politika politisianina tsy niafina fa niharihary tao ambadika. Hikoha-maina aza atao, mainka fa misy sery hanilahana. Nahazo vahana tokoa ny fahitana azy. Nahazo vahana, satria nangina, toa tsy nahitam-peo ny ankilany. Tsy mahagaga raha nahazo vahana ny honohono sy ny resabe. Lesoka tokony harenina izany, fa tsy rehefa miakatra dia miakatra ny maripana, rehefa mirehitra dia mirehitra ny afo vao mitady ny fomba rehetra hamonoana azy.
Moa tsy izany ny mahatonga ny fihenan’ny fitokisan’ny vahoaka ny fitondrana ? Raha tena misy sy mipetraka tokoa io fitokisana io, tsy hisy akory ireny fitsaram-bahoaka mahazo vahana sy mirongatra etsy sy eroa ireny. Noho izany, tsy ny mpanao gazety, tsy ny vahoaka ihany no angatahina lava ny fanovana toe-tsaina, fa ny mpanao politika sy ny mpitondra firenena amin’ny ankapobeny mihitsy.